Ogow halka Dareenka Dumarka uu ku jiro adigoo wax ka baranaya !!? Talada sacdiyo xaaji | shumis.net
Home » galmada » Ogow halka Dareenka Dumarka uu ku jiro adigoo wax ka baranaya !!? Talada sacdiyo xaaji
Ogow halka Dareenka Dumarka uu ku jiro adigoo wax ka baranaya !!? Talada sacdiyo xaaji
Si uu u helo Galmo ama xiriir wanaagsan oo ku aadan dhanka Galmada waxa uu u baahdaa in uu helo wanaaga ku haboon ee noloshiisa isagoona dhamaan waxaasi ka baran kara goobaha lagu hormariyo arimaha bulshada.
baaritaano la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in hablaha da’doodu u dhexayso 18 ilaa 29 ay ka haystaan aqoon fiican kulanka ka dhaca qolka sariirtu taal, Halka raguna ay yar tahay aqoonta ay ka haystaan qolka raaxada.
Jirka haweenka waxa uu leeyahay meelo aad u dareen badan, laakiin nasiib daro lama ay soo dhalan haweenku buug ay ku qoran yihiin meelahaasi. Markaa waxa haboon in aad baadhitaan ku samaysid si aad u hesho meelaha xaaskaagu ka leedahay dareenka badan. Sida ay u muujiso dareen ayaad ka fahmaysaa in ay ku raaxaysanayso. Markaas ayaa waxa aad ogaanasysaa in aad wado fiican cagta saartay. Qalabka aad adeegsanaysaana si aad u hesho meelahaa aad raadinayso ee dareenka badanina waa dibnahaaga, carabkaaga, farahaaga iyo gacmahaaga. Natiijaduna waxa ay noqonaysaa hooba hoo bay leedahay.
Kala bedbedel noocyada galmada
Title: Ogow halka Dareenka Dumarka uu ku jiro adigoo wax ka baranaya !!? Talada sacdiyo xaaji